Budata BiP Messenger maka Windows
Free Budata maka Windows (106.40 MB)
Budata BiP Messenger,
BiP Messenger bụ ozi izipu ozi Turkcell na ngwa nkata vidiyo enwere ike iji na ekwentị mkpanaaka (Android na iOS), ihe nchọgharị weebụ na desktọọpụ (Windows na Mac kọmputa). Pịa bọtịnụ Budata Desktọpụ Budata dị nelu iji jiri BiP Messenger, ọrụ izi ozi ngwa ngwa dịka ewu ewu na WhatsApp na Telegram na mba anyị, na kọmputa gị. BiP desktọọpụ ngwa bụ nefu.
Turkcell BiP Messenger bụ nkwukọrịta nkwukọrịta nefu nke ndị injinia English% wepụtara. Ewezuga ozi na mkparịta ụka vidiyo, ọ bụ ikpo okwu ebe ị nwere ike ịgbaso akwụkwọ akụkọ, egwuregwu, ọnọdụ ihu igwe na ọnụego mgbanwe. Ekele maka nsụgharị BiP, ị nwere ike izipu ndị kọntaktị gị nasụsụ ọ bụla ma tụgharịa asụsụ ndị na-abata nasụsụ ị chọrọ. Nwere ike ịkpọ oku HD dị mma na oku vidiyo yana ịkpọ oku vidiyo otu ihe ruru mmadụ iri na Bip. Onyinye nwere ihe ijuanya dị na ngwa mobile BiP. I nwekwara ike nyochaa SMS gị site na BiP. Kedu ihe dị na BiP?
Oku na oku vidiyo: can nwere ike ịkpọ oku dị elu na oku vidiyo na ịntanetị na ndị ị hụrụ nanya niile na BiP.
Ozi na-efu: Na ozi na-apụ nanya na-abụghị nanị BiP, ị nwere ike ime ka ozi gị pụọ na ihuenyo nkata mgbe oge ịtọchara mgbe ị na-ezigara ndị ị hụrụ nanya.
Ọdịdị na-atọ ụtọ dị ka enweghị ebe ọzọ: Akwụkwọ mmado Yiğit Özgür bụ nke e mere naanị maka BiP, yana ọtụtụ akwụkwọ mmado na ụdị English na-eme ka mkparịta ụka gị na BiP mara mma.
Mepụta okpu: You nwere ike ịmepụta okpu nke gị site na iji foto dị na BiP ma ọ bụ were foto ọhụrụ ma kesaa ya na ndị ị hụrụ nanya niile.
Ikike ịkọrọ onye ọ bụla: can nwere ike ịmegharị nkwukọrịta gị niile na BiP! I nwekwara ike izipu ndi enyi gi ndi na-abughi BiP site na izipu SMS site na BiP.
Izi ozi otu: You nwere ike izipu ọtụtụ ndị enyi notu nkata ahụ.
Sharingkekọrịta ebe: You nwere ike ịkekọrịta ọnọdụ gị notu notu gaa notu ma ọ bụ izi ozi otu.
BiP Weebụ: can nwere ike iji BiP na kọmputa gị ma ọ bụ mbadamba site na web.bip.com.
Ọnọdụ abalị BIP: Site niji BiP na ọnọdụ abalị, ịnwere ike ịnwe ahụmịhe izi ozi ka mma ma chekwaa batrị.
Etu esi ebudata BiP na komputa?
Nwere ike ibudata ngwa BiP na kọmputa gị site na ịpị bọtịnụ BiP Download dị nelu. Iji malite ozi site na desktọọpụ gị;
Mepee BiP na ekwentị gam akporo / iPhone gị.
Kpatụ akara ngosi ọzọ wee họrọ BiP Web.
Nyochaa koodu QR naka nri nke BiP.
Nokpuru Ntọala - BiP Web, ị nwere ike ịhụ ngwaọrụ ndị abanyela ma pụọ.
BiP Messenger Ụdịdị
Nha faịlụ: 106.40 MB
Kacha ọhụrụ na: 05-07-2021